13 Dugsiyada Caafimaadka ee ugu Fiican Cuba
In kasta oo arday badani jecel yihiin inay aadaan Mareykanka, Yurub, Kanada, iwm si ay u bartaan cilmiga caafimaadka, Cuba waa waddan kale oo weyn oo ku sii jeeda shahaadada caafimaadka. Cuba waxay leedahay rajo shaqo oo wanaagsan dhakhaatiirta caafimaadka ee waaxdooda caafimaad. Sidaa awgeed, qodobkani wuxuu ku siin doonaa faahfaahinta iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Cuba.
Nidaamka waxbarashada ee Cuba ayaa caan ka ah adduunka oo dhan oo bixiya waxbarasho tayo sare leh. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee ardayda caalamiga ahi u aadaan Cuba waxbarashada ayaa ah in waddanku uu bixiyo waxbarasho aad u jaban.
Dhinaca kale, dhakhaatiirta caafimaadka ee Cuba ayaa baahi weyn loo qabaa. Taas macnaheedu waxa weeye inay jiraan rajo wanaagsan oo shaqo ee dhakhaatiirta caafimaadka ee dalka. Haddii aad ku raad-joogto barnaamij caafimaad oo ka socda Cuba, aad baad u hubtaa inaad ku soo noqonayso maalgashigaaga (ROI).
Ma jeceshahay inaad wax ku barato si aad u noqotid dhakhtar caafimaad Cuba? Hadday haa tahay, markaa, maqaalkani wuxuu kakooban yahay iskuulada caafimaadka ee ugu sareeya Cuba oo bixiya waxbarasho heer sare ah oo qiimo jaban.
Ma ku baran karaa Cuba?
Haa. Cuba waxay leedahay qaar ka mid ah hay'adaha tacliinta ugu wanaagsan Waqooyiga Ameerika iyo adduunka. Hay'adahan shahaadooyin kaladuwan oo kaladuwan oo kaladuwan ka qaatay iyo dawada ayaa kamid ah.
Barnaamijka caafimaadka ee jaamacadaha Cuba waxaa loo fidiyaa ardayda maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ka kala yimid qaybaha kala duwan ee adduunka.
Iskuullada caafimaad ee Cuba ma bilaashbaa?
Dhammaan iskuulada caafimaadka ee Cuba maaha bilaash maadaama ardayda looga baahan yahay inay bixiyaan waxbarashada iyo khidmadaha.
Nasiib wanaagse, dugsiga kaliya ee caafimaadka ee Cuba ee loo arko inuu bilaash yahay ayaa ah Dugsiga Latin Ameerika ee Daawada (ELAM). Iskuulku waa dugsiga caafimaadka ee ugu weyn Cuba, wax lacag ahna kama qaado.
Codsadeyaasha doonaya inay wax ku bartaan ELAM oo lacag la’aan ah waa inay u dhexeeyaan 18 iyo 25 sano oo ay haystaan ​​shahaadada bachelorka ama dibloomada dugsiga sare ee dalkooda.
Ajaanibta ma ku baran karaan Cuba?
Haa. Jaamacadaha Cuba waxay soo dhaweynayaan ama marti gelinayaan ardayda caalamiga ah ee ka socota meel kasta oo adduunka ah barnaamijyadooda caafimaad. Ardaydan waxaa la siiyaa barnaamijyo ku saabsan daawada iyadoo aan loo eegin jinsiga, jinsiyadda, diinta, iwm.
Immisa sano ayey qaadataa in dhakhtar looga noqdo Cuba?
Muddada barnaamijka caafimaad wuxuu qaadanayaa waqti dheeri ah oo ka duwan qaybaha kale ee daraasadda. Marka loo eego Nidaamka waxbarashada heerka koowaad ee Cuba, waxay ardayda ku qaadan doontaa inta u dhexeysa afar (4) ilaa lix (6) sano si ay u helaan shahaadada koowaad ee caafimaadka.
Sideen u codsadaa inaan ku barto daawada Cuba?
Codsiyada lagu barto daawada Cuba waxay ka bilaabanayaan buuxinta shuruudaha barnaamijka caafimaadka ee waddanka.
Shuruudaha codsiga ee daawada Cuba waxaa ka mid ah:
Dibloomada dugsiga sare / qoraalada dugsiga sare
Shahaadada caafimaadka (baaritaanka HIV iyo baaritaanka uurka)
Foomka dalabka deeqaha waxbarasho haddii ay jiraan
Majiro diiwaan dambiyeed
Shahaadada jirdhiska iyo maskaxda
Sawirada baasaboorka. Shan sawir 3cm 3cm 2cm (Xiriirka Caalamiga) iyo lix sawir 2cm XNUMXcm (Xafiiska Diiwaan Geliyaha).
Dukumiintiyada buuxinta ee Xafiiska Diiwaan Geliyaha.
Haddii aad haysato dukumintiyada kor lagu soo sheegay, waxaad hadda ku soo gudbin kartaa dalabkaaga websaydhka dugsiga.
Dhinaca kale, ardayda caalamiga ah waxaa looga baahan yahay inay haystaan ​​fiisaha ardayda. Haddii aad tahay arday ajnabi ah, waxaad la xiriiri kartaa Qunsuliyadda Cuba ee dalkaaga hooyo si aad u ogaato shuruudaha. Sababta ayaa ah in shuruudaha fiisaha ardayda Cuba ay ku kala duwan yihiin waddan kale.
Immisa ayey dhakhaatiirtu ka kasbadaan Cuba?
Dowladda Cuba iyada oo loo marayo Golaha Wasiirada ee Cuba waxay soo warisay in mushaaraadka dhakhaatiirta takhasuska koowaad ee takhasuska ku leh dawada qoyska, dawada gudaha, iyo dhakhaatiirta caruurta ay ka 573 Kuba pesos (CUP) ilaa CUP $ 1,46. Intaa waxaa dheer, dhakhaatiirta leh shahaadada labaad ama takhasuska laba geesoodka ah ayaa kasban doona inta udhaxeysa CUP $ 627 ilaa CUP $ 1,600.
Liiska Dhammaan Dugsiyada Caafimaadka ee Cuba
Hoos waxaa ku yaal liiska dhammaan iskuulada caafimaadka ee Cuba. Machadyadan waxay bixiyaan shahaadooyin caafimaad waxayna ka mid yihiin:
Iskuulada Caafimaadka ee ugu sareeya Cuba ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Iskuulada ugu sareeya caafimaadka ee Cuba ardayda caalamiga ah waxaa ka mid ah:
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) ama Iskuulka Caafimaadka ee Latin Amerika (LASM)
Jaamacadda Sayniska Caafimaadka ee Sancti Spiritus
Iskuulada Caafimaadka ee Kuuba oo wax ku dhiga af Ingiriis
In kasta oo luqadda ugu weyn ee wax lagu baro dugsiyada caafimaadka ee Cuba ay tahay Isbaanish, iskuulada qaarkood waxay maamulaan barashada luqadda Ingiriisiga ardayda caalamiga ah. Dugsiyadan caafimaadka ayaa ah sida soo socota:
Iskuulka Caafimaadka Latin America (ELAM)
Iskuulada Caafimaadka ee Bilaashka ah ee Cuba
Dhamaan iskuulada caafimaadka ee Cuba, jaamacada kaliya ee bixisa waxbarasho caafimaad oo bilaash ah ayaa ah ELAM (Iskuulka Caafimaadka ee Latin America).
Iskuulada Caafimaadka ee ugu Fiican Cuba
Iskuulo badan oo kuyaala Cuba waxay bixiyaan shahaadooyin daawo laakiin waxaa jira qaar ka mid ah iskuulada caanka ku ah wadanka oo bixiya waxbarasho caafimaad oo heer caalami ah. Sababtaas awgeed, dugsiyadan waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu fiican dhinaca daawada.
Iskuulada caafimaadka ee ugufiican Cuba waxaa lagu xushaa iyadoo lagu saleynayo tirada barnaamijyada ay bixiyaan, dib u eegista ardayda, iyo darajada.
Marka, iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Cuba waa sida soo socota:
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELM)
Universidad de La Habana (Ingiriis, Jaamacadda Havana or UH) waa jaamacad ku taal Havana oo la aasaasay 1728. Waa jaamacadda ugu da'da weyn Cuba iyo mid ka mid ah hay'adaha ugu horreeya Waqooyiga Ameerika.
Jaamacadda Havana waxay ka kooban tahay lix iyo toban (16) kulliyadaha tacliinta iyo afar iyo toban (14) xarumood oo cilmi baaris ah oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee daraasadda sida dhaqaalaha, sayniska, cilmiga bulshada, iyo cilmiga bulshada.
Marka loo eego qiimeynta 2020 Times ee Tacliinta Sare, UH waxaa lagu qiimeeyay 44th Latina America iyo 1001th adduunka.
Qalinjabiyeyaasha xusida mudan waxaa ka mid ah Fidel Castro, Raúl Castro, iyo Ramón Grau.
Jaamacadda Ciudad Universitaria Jose Antonio Echeverria (oo af Ingiriisi ah, Jaamacadda Teknolojiyada José Antonio Echeverría ama CUJAE) waa jaamacad dawladeed oo ku taal Havana, Cuba oo la aasaasay 1964. Machadka waxaa aasaasay kacaankii Cuba iyo ra'iisul wasaarihii hore, Fidel Castro.
Jaamacadda Teknolojiyada José Antonio Echeverría waxay leedahay sagaal (9) kulliyadood iyo laba iyo toban (12) xarumood oo cilmi baaris ah. Barnaamijyada tacliinta waxaa lagu bixiyaa tas-hiilaad casri ah xubnaha macalimiinta caanka ah.
Universidad de Oriente Santiago de Cuba (Ingiriis, Jaamacadda Oriente or UO) waa jaamacad dawladeed oo ku taal Santiago de Cuba, Cuba oo la aasaasay 1947.
Jaamacadda Oriente waa mid ka mid ah hay'adaha ugu da'da weyn Cuba ee bixiya shahaadooyinka caafimaadka. UO waxay bixisaa barnaamijyo tacliimeed iyada oo loo marayo laba iyo toban kulliyadood oo ay ka mid yihiin daawo, cilmiga bulshada. aadanaha, sharciga, injineernimada korontada, dhaqaalaha & maamulka, injineernimada farsamada, sayniska dabiiciga, xisaabta & sayniska kombiyuutarka, injineernimada kiimikada, waxbarashada masaafada, iyo dhismaha.
Sida laga soo xigtay Jaamacadaha Sare, Jaamacadda Oriente waxay ku jirtaa 87th Latin America.
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (Ingiriis, the Jaamacadda Marta Abreu ee Las Villas or UCLV) waa jaamacad dawladeed oo ku taal Santa Clara, Cuba oo la aasaasay 1952.
Jaamacadu waxay leedahay xarun fog (Universidad de Montaña) oo ku taal bartamaha buuraha Escambray ee Topes de Collantes.
UCLV waxay bixisaa barnaamijyo shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta ah illaa saddex iyo toban (13) kulliyadaha tacliinta.
Qiimeynta Jaamacadaha aduunka ee QS waxay kuxirantahay UCLV 149th Latin America iyo 521 - 530th aduunka.
Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodriguez (Ingiriis, the Jaamacadda Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez or UCF) waa jaamacad dawladeed oo ku taal Cienfuegos, Cuba oo la aasaasay 1979.
Xaruntu waa meel fiican oo lagu dabagalo waxbarashadaada caafimaadka. Iyadoo la siinayo barnaamijyo tacliimeed heer caalami ah iyo cilmi baaris ku saabsan daaweynta, UCF waxay u taagan tahay mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Cuba.
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) ama Iskuulka Laatiin Ameerika ee Caafimaadka (LASM) waa iskuul caalami ah oo caafimaadka dadweynaha ku yaal Havana, Cuba. Waxaa la aasaasay 1998-kii oo ay sameysay dowladda Cuba.
Machadku wuxuu ujeedkiisu yahay inuu tababaro dhakhaatiirta Caafimaadka Aasaasiga ah ee qaybaha kala duwan ee adduunka. ELAM waxaa si weyn loogu yaqaanaa inay heysato isqorista ardayda ee ugu weyn iskuulada kale ee caafimaadka adduunka. Sanadkii 2013, ELAM waxay diiwaangeliyeen in kabadan 19,550 arday iyo ardayda caalamiga ah waxay lahaayeen tirada ugu badan ee isqorista. Sababtaas awgeed, ELAM waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu wanaagsan Cuba.
Manhajka caafimaad ee ELAM wuxuu ku lug leeyahay lix (6) sano oo daraasado tacliimeed ah waxaana loo qaybiyaa laba iyo toban (12) semestar. Inta lagu jiro barnaamijka caafimaadka, ardaydu waxay labada sano ee hore ku qaataan xarunta ELAM. Ardaydu waxay ku qaataan sannadaha u haray barnaamijka caafimaadka mid ka mid ah 21-ka dugsi ee kale ee caafimaadka ee Cuba.
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara (Ingiriis, the Jaamacadda Cilmiga Caafimaadka ee Villa Clara) waa xarun tacliin sare oo ku taal Cuba oo la aasaasay 1689.
Machadku waa guri kale oo ardayda caalamiga ah maadaama uu soo saaray in kabadan 500 oo kaqalinjabisay caafimaadka dibada kana yimid wadamada 45.
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara waxay bixisaa shahaadada koowaad ee jaamacadeed iyo shahaadada koowaad ee shahaadada caafimaadka iyada oo loo marayo cutubyadeeda waxbarida ee 41 (8 Isbitaalada Jaamacadda iyo 33 Barista Caafimaadka) Barnaamijka caafimaadka ee jaamacadeed wuxuu qaadanayaa lix (6) sano in la dhammaystiro.
Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo (Ingiriis, Jaamacadda Guantánamo ee Sayniska Caafimaadka or UCMG) waa jaamacad dawladeed oo ku taal Guantánamo, Cuba oo la aasaasay 2009.
UCMG waxaa loo abaabulay afar (4) kulliyadood oo tacliimeed oo ay ku jiraan medicin, scudurada, kalkaalinta, Iyo teknoolajiyada caafimaadka. Machadku wuxuu bixiyaa shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta maadooyinkan waxbarasho.
Jaamacadda Guantánamo ee Sayniska Caafimaadka waxaa aqoonsan Wasaaradda Tacliinta Sare ee Cuba.
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín - Mariana Grajales Coello (Ingiriis, the Jaamacadda Holguín ee Sayniska Caafimaadka) waa jaamacad caafimaad oo ku taal Holguín, Cuba oo la aasaasay 1965.
Jaamacadu waa mid kamid ah iskuulada caafimaadka ee ugufiican Cuba xarumaheeda cilmi baarista caafimaadka kacaanka. Ardayda machadka waxay ku takhasusi karaan cudurada cudurada, daryeelka degdega ah, cudurada faafa, calool fayoobaanta, hiddo-wadaha, daweynta, daaweynta dabiiciga ah, iwm.
Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila (oo af Ingiriisi ah, The Jaamacadda Ciego de Ávila ee Cilmiga Caafimaadka) waa jaamacad caafimaad oo ku taal Ciego de Ávila, Cuba oo la aasaasay 1978.
Jaamacada ayaa shaqeyneysay tan iyo markii la aas aasay ugu dambeyntiina waxaa loo aqoonsaday jaamacad caafimaad si ay u siiso shahaadada caafimaadka sanadkii 2009.
Universidad de Ciencias Medicas de Cienfuegos (Ingiriis, the Jaamacadda Sayniska Caafimaadka, Cienfuegos) waa jaamacad caafimaad oo guud oo ku taal Cienfuegos, Cuba oo la aasaasay 1979.
Xaruntu waa guri loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Ardaydan ajnabiga ah waxay ka kala yimaadeen in ka badan 52 dal oo adduunka ah.
Universidad de Ciencias Medicas de Cienfuegos waxay bixisaa barnaamijyo tacliimeed oo ku saabsan caafimaadka, qalliinka, umulaha & cudurada haweenka, iyo caafimaadka carruurta. Barnaamijka caafimaadku wuxuu ku dhammaadaa layli wareega ah.
Universidad de Ciencias Medicas de Cienfuegos waxay xiriir la leedahay Dr. Gustavo Aldereguía Lima Isbitaalka Guud ee Gobolka.
Jaamacadda Sayniska Caafimaadka ee Sancti Spiritus waa jaamacad caafimaad oo ku taal Cuba oo la aasaasay 1994. Waxay leedahay isqoritaan ka badan ardayda 700 oo ka kala yimid dalal kala duwan.
Jaamacadu waxay tababaro xirfadlayaal caafimaad oo macquul ah iyadoo siineysa iyaga shahaadada koowaad iyo shahaadada koowaad ee caafimaadka. Waxay ku bixisaa barnaamijyadan waxbarasho iyada oo loo marayo iskaashiga ay la leedahay ELAM (Latin American School of Medicine).
Jaamacadda Sayniska Caafimaadka ee Sancti Spiritus waxaa aqoonsan Wasaaradda Tacliinta Sare ee Cuba.
Sida Loo Noqdo Kaaliye Caafimaad
11 Deeqaha Caafimaadka ee ugu Fiican Kanada Ardayda Caalamiga ah
50 + Dugsiyada Caafimaadka ee ugu Fiican Mareykanka ee Takhasusyo kala duwan leh
13 Jaamacadaha Caafimaadka ee Australia Ardayda Caalamiga ah
Liistada Dugsiyada Caafimaadka ee Kanada oo Dhameystiran Faahfaahintooda
Previous Post:13 Deeqda waxbarasho ee ugufiican Dowlada Canada
Post Next:10 Jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee loogu talagalay Barnaamijyada Shahaadada iyo Dibloomada